माल्दिभ्स र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रियाे, चीन बलियो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
माल्दिभ्स र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रियाे, चीन बलियो
बीबीसी। भारतका छिमेकी देशमा चीनको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। माल्दिभ्समा सैन्य सरकार आएपछि त्यहाँ भारतको उपस्थिति लगातार कम हुँदै गएको छ। माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनलाई चीनको समर्थन प्राप्त छ।
यामीन सरकारले भारतसँग आफ्नो देशबाट सैन्य हेलिकप्टर फिर्ता लैजान भनेको छ। जुन महिनामा भारतसँग भएको करार सम्झौता समाप्त भएको र सो करार नविकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको माल्दिभ्सले जनाएको छ।
हिन्द महासागरका दुवै देशमा भारत दशकौंदेखि सैन्य र नागरिक सुविधान प्रदान गर्दै आएको थियो। अब उक्त काम चीनले झन आक्रमक तरिकाले गरिरहेको छ। र भारतले ती देशबाट पछि हट्नु परेको छ। यो वर्ष राष्ट्रपति यामीनले माल्दिभ्समा जब संकटकाल लगाए, त्यसमा भारतले विरोध गरेको थियो। जसलाई राष्ट्रपति यामीनले माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।